नेपाल आज | अनलाइन कक्षाले गर्दा शिक्षा अझै प्रयाक्टीकल हुँदै गएको छः कुमार थापा[भिडियो]
नेपाल आजसँग कुरा गर्दै बृहस्पति विद्यासधनका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा व्यवस्थापक कुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुभयो । विद्यालय नखुलेको बेलामा अनलाइन कक्षा शिक्षा क्षेत्रको लगि एक प्रवाभकारी समाधान हो भन्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो ।
कस्तो चलिरहेको छ यो अनलाइन शिक्षा ?
म एउटा अभिभावक पनि हुँ । आफैँ एउटा निरन्तर सिकिराख्ने विद्यार्थी पनि हुँ । विद्यालयको प्रिन्सिपलमात्र पनि होइन । मैले चै प्रवावकारी नै पाएको छु किन भने जस्तै एउटा उदाहरण दिँदा ९ बजे कक्षा ९ को साइन्स क्लास सुरु भयो र तोकएको समयमा शिक्षक र विद्यार्थी आउने भए । केही ुमय हालचाल सोधिन्छ । त्यसपछि शिक्षकले तयार गरेको प्रस्तुतिमार्फत विद्यार्थीले अझ बढी सोच्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको इन्ट्रेष्ट जगाउन केही कार्य दिइन्छ र विद्यार्थीले गरेको कार्य अनुसार शिक्षकले विद्याथीृले बुझे बुझेनन् भनेर मुल्याङ्कन गर्छन् । त्यसकारण एउटा शिक्षक र सम्पूर्ण विद्यार्थीबीच राम्रो इन्गेजमेन्ट भयो नि त । शिक्षा झन् बढी प्रयाक्टीकल हुँदै गयो नि ।
अनलाइन कक्षा नै प्रभावकारी हुने रैछ, त्यसो भए विद्यालय किन गइराख्नुपर्यो त ?
यो चै कस्तो छ भने, हुन त तपाईको कुरा एक हिसाबले सही हो किनकी अनलाइन एजुकेहन अहिले २ महिना देखिमात्र सुरु भएको होइन । यसको पनि एउटा इतिहास छ । मुक भनिन्छ म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्ष भनेर १०,१२ वर्ष भयो सुरु भएको । म आफैले पनि र कयौँ मैले चिन्ने व्यक्तिले यो कोर्ष लिनुभएको छ । हामीले चै के लाई हेर्नुपर्छ भने अभाइलेभल अप्सनलाई हेर्नुपर्छ । अहिलेको अभाइलेभल अप्सनमा चै अनलाइन नै राम्रो हो भन्न खोजिएको हो ।